Qaadida Dacwooyinka Khatalida Cayrta ah | LawHelp Minnesota
Qaadida Dacwooyinka Khatalida Cayrta ah
Qaadida Dacwooyinka Khatalida Cayrta ah284.59 KB
Waa maxay qaadida dacwadaha maamul mamnuucu (ADH)?
Khatalida macnaheedu waa been ka sheegida ama qarinta akhbaar si loo helo manfac dowladeed. Waxaana ku jira isku dayga gadida manfaca SNAP ka ama kaarka cayrta ee EBT ga. Ku gadashada ama isku day ku gadasho sigaar ama khamri ee kaarka EBT waa khaa’nimo iyana.
Hadii ay dowladu is tiraa saa ayaad sameysay, waa ay ku maxkamadayn kartaa, iyo/ama waxaa dhici karta in ay qabtaan kulan lagaaga mamnuucayo cayrta (ADH). ADH waa kulan lagu go’aansanayo in aad sameysay khatalaad madani ah si aad u hesho manfacyada [MFIP, DWP, Childcare, General Assistance (GA), Group Residential Housing (GRH), Minnesota Supplemental Aid (MSA), Medical Assistance, MinnesotaCare, SNAP (food support) iyo Emergency Assistance].
Maxay dowladu u baahan tahay in cadeyso?
kulankaa la yiraa ADH, dowladu waa khasab in ay si cad oo aan shaki ku jirin ay cadeyso khaa’imaadi in ay dhacday. Taa macnaheedu waa in ay cadeeyaan in aad u sameysay ama aad u tiri si kas ah waxaan jirin si aad dowlada uga hesho wax aadan xaq u lahaateen in aad hesho.
Ka waran hadii xaakim ADH ku uu xukumo khaa’inimo in aan sameeyey?
Kiisaska intooda badan, marka ugu horeeysa oo taasi dhacdo waxaa laguu diidayaa inaad hesho manfacyadaa 1 sanno, marka labaad ee aad taa sameyso, 2 sanno ayaa laguu diidi manfacyada, mar sedexaad waligaaba waa lagaa mamnuuci inaad manfacyadaa qaadato. Hadii lagaa mamnuuco MFIP, waxaa kaloo laguu diidi iyana SNAP. Hadii xaakimku xukumo inaad manfacyada SNAP ka qaadatay in ka badan 1 gobol isku mar, waxaa laguu diidi kartaa manfaca SNAP ka 10 sanno. Xabsi uma aadi kartid ADH awgeed, laakiin wax kasta oo aad tiraahdo ama wax kasta oo hay’ada ADH soo ogaato adiga ayaa baxar lagugu galin karaa hadii ay go’aansadaan in ay ku maxkamadeeyaan.
Ma ka tanaasulaa in dacwada la aqqdo?
Dowladu waxay ku waydiisan in aad u saxiixdo foom si aad u tiraa ma doonayso dacwada in la dhageyso. Wac xafiiska gargaarka dhanka sharciyada (Legal Aid) si ay talo kuu siiyaan inta aadan waxba saxiixin! Hadii aad saxiixdo, waxa aad fara ka qaadaysaa xaquuqdaadii ahayd in dacwadaada la qaado. Waxaad kaloo lagu diidi karaa manfacyada xataa hadii aadan qiran in aad sameysay waxa dowladu tiri wada sameysay. Hadii foomka aad saxiixdo, waxaad haysataa 30 cisho oo aad uga noqon karto kolkaa la xiriir xafiiska (Legal Aid) ka hadii aad su’aal qabto.
Kolkaa wali ma i Maxkamadeyn karaan?
Haa. Dowladu labadana way sameyn kartaa oo waa ku maxkamadeyn kartaa ama waxa ay u gudbin kartaa hawshaada hay’ada ADH. Wax walba oo aad u sheegto dowlada adigaa ha dhow baxar lagugu galin karaa oo dib laguugu isticmaali karaa. Hadii aad hadal oraah ku tiraa ama aad warqad saxiixdo, waxaa dhici karta in aad ka tanaasulayso xaquuqdaadii ha dhow kolka maxkamada aad saaran tahay aad ku isticmaali kari lahayd qodobka 5 aad ee dastuurka (5th Amendment). Qodobka 5aad (5th Amendment) waa xaquuqda uu muwaadinku uu leeyahay in uusan naftiisa ku muducin kolka uu maxkamad dambi saaran yahay. Waxaad u baahan tahay in aad la hadasho qareen si aad u hesho akhbaar dheeraad oo arrintan ku saabsan.
Ka waran hadii aan racfaan ka qaato ogaysiis ah in manfacayga la iga joojinayo ama la iga yareynayo?
Racfaanka waxaa lagu dari karaa dhageysiga dacwada ADH ah ee khaa’inimada la xiriirta. Markiiba isku day inaad hesho gargaar dhanka sharciyada ah. Dhagaysiga dacwooyinka caynkaan ahi waa kuwa khatal leh, waayo waxa dowladu in ay cadeyso laga rabaa waa ay ka duwan yihiin jarida manfacyada loo jaro kahatalaada awgood. Dowladu waxa ay u baahan tahay uun in ay cadeyso in cadeymaha intooda badani inay dhinacooda yihiin si ay u jarto ama u yareyso manfacyada. Laakiin, marka ay cadeynayaan khatalaad waxa ay u baahan yihiin inay cadeeyaan khatalaad cad in ay dhacday.
Ka waran hadii ay go’aansadaan in ay I maxkamadeeyaan?
Kolkaa waa in aad waydiisato inay kaa dhaafaan ama dib u dhigaan dhageysiga dacwada ADH.
Ka waran hadii la igu helo inaan khatalaad sameeyey ama hadii la i galiyo barnaamijka weecinta la yiraa?
Hadii lagugu heli dambi ah masuqmaasuq oo ku saabsan cayrta, waa laguu diidi manfacyada. Sidoo kale, waxaa laguu diri karaa xabsi ama waxaa lagu xukumi karaa ganaax. Waxaa laguu diidi manfacyada 1 sanno, marka labaad ee aad taa sameyso sanno ayaa laguu diidi 2 sanno manfacyadaa, mar sedexaad waligaaba waa lagaa mamnuuci inaad manfacyadaa qaadato. Arrintan waa run xataa hadii lagu geliyo barnaamijka la yiraa weecinta ama maxkamadu amarto in aan lagugu qaadan dambiga lagugu helay ama lagu galiyo xabsi dowlo.
Ka Waran hadii aanan ahayn muwaadin (citizen) U.S. ah?
Hadii aadan ahayn muwaadinMareykan ah (U.S.) sida ugu dhaqsaha badan ula tasho qareen. Arrintan kore waxa ay saameyn kartaa sharcigaaga wadanka (immigration) aad ku joogto.